एप्पल पेन्सिल २ को एयरपड्स जत्तिकै टेक्नोलोजी हुन सक्छ म म्याकबाट हुँ
अघिल्लो लेखमा हामीले आफैलाई प्रश्न सोध्यौं कि एप्पलले नयाँ आईप्याड, नयाँ म्याकबुक वा दुबै अक्टुबरमा उहि समयमा प्रस्तुत गर्ने छ कि छैन भनेर प्रश्न गरे। उनीहरूले प्रस्तुत गरेको उत्पादन, केहि हल्लाहरू छन् जुन एप्पलले आफ्नो एप्पल पेन्सिल सुधार गरेको छ, दुबै स्वायत्ततामा, उपकरणहरू र प्रकार्यहरूसँग जडानको प्रकार।
प्रकार्यहरूका लागि, प्रयोगको नयाँ रूपहरू आउँनेछन् जुन प्रयोग गर्दा अधिक इशाराहरू गर्न अनुमति दिनेछ। स्वायत्तताका बारे, यो पर्याप्त सुधार हुनेछ र कनेक्शन प्रकारको सन्दर्भमा हामी एयरपडहरूको आगमनको साथ जारी हुने जडान विधिको आगमन हुनेछ।
एप्पल पेन्सिल प्रयोग गर्न सुरू गर्न हामी यसलाई सँधै आईप्याडमा जडान गर्नुपर्दछ ताकि ब्लुटुथ सक्रिय हुन्छ र यसले कार्य गर्न सुरू गर्दछ। केही समय पछि यसको प्रयोग नगरी यो ऊर्जा बचत गर्न विच्छेद गर्दछ र हामीले फेरि यस्तै प्रक्रिया गर्नुपर्दछ।
यसलाई रिचार्ज गर्नका लागि तपाईले यो लाईटनिंग पोर्टमा पनि जडान गर्नुपर्दछ यसलाई रिचार्ज गर्नका लागि वा एड्याप्टरको साथ आईप्याड एडाप्टरमा आफै पनि। जहाँसम्म, एक USB-C पोर्टको साथ आईप्याडको सम्भावित आगमनको साथ, जस्तै उनीहरूको ल्यापटपहरूमा, सबै परिवर्तन हुन सक्छ। नयाँ एप्पल पेन्सिलले रिचार्जको लागि यूएसबी-सी पोर्ट ल्याउन सक्छ, त्यसैले हामीसँग धेरै छिटो रिचार्ज हुनेछ। हामीले उपकरणहरूसँग पनि जडान गर्नुपर्नेछ यो पहिले नै एयरपडहरूमा प्रयोग भइरहेको कनेक्शन प्रोटोकलको साथ बढी सहज हुनेछ।
अब, नयाँ एप्पल पेन्सिल अपेक्षित नयाँ म्याकबुकहरूसँग उपयुक्त हुनेछ? यदि हामीले एप्पल ल्यापटपको हालको लाइन विश्लेषण गर्‍यौं भने हामी देख्नेछौं कि ट्र्याकप्याड एकदम विकसित भएको छ। के यो हाम्रो लागि प्रस्तावना हुनेछ म्याकमा एप्पल पेन्सिल २? यो स्पष्ट छ कि ट्र्याकप्याडमा त्यस्तो उल्लेखनीय वृद्धि केहिको लागि हो जुन एप्पलले हामीलाई भन्न चाहेनन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक कम्प्युटरहरू » मैकबुक प्रो » एप्पल पेन्सिलको विकास यो म्याकबुकसँग उपयुक्त छ?
अक्टुबर १२ मा कारपूल कराओकेको दोस्रो सत्र